Window 7, Start Menu ရဲ့ Size ကိုလျော့ချရအောင် ... ~ မျိုးကို
Window 7, Start Menu ရဲ့ Size ကိုလျော့ချရအောင် ...
06:35 Technique, Window7No comments
ကျွန်တော်တို့ အတွက် အသုံးမ၀င်လှတဲ့ Recent program entries နဲ့ ကြီးနေတယ်လို့ထင်ရတဲ့ Window7Start Menu နဲ့ မပျော်မရွှင် ဖြစ်နေလားလို့ပါ။
အထက်မှာ ပြထားသလို ဒါလေးက Window7ရဲ့ Recent Program တွေကိုပြဖို့ Default Number 10 ကြောင့် အသုံးမလိုတဲ့ Program တွေနဲ့ ပြည့်နေတာပါ။
Window7က သူရဲ့ Start Menu Size ကိုလည်းလိုသလောက်လျော့ချခွင့် ပြုပါတယ်။
1.Start Menu Button လေးကို Right Click နှိပ်ပါ။
2.ဒီလိုလေး ပေါ်လာပြီ ဆိုရင် Customize ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။
3. ဒီလိုလေး ပေါ်လာပြီဆိုရင် ကိုလိုချင်သလောက်လေးကို Customize လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ နံပါတ်6ကို လုပ်လိုက်ပါတယ်။
4. Apply ပြီး OK ပြီးပြီးဆိုရင် တော့ အောက်က လိုပုံမျိုးလေး ရလာပါလိမ့်မယ်။